Ciidamada Ammaanka oo Howlgallo ka sameeyey Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Ciidamada Ammaanka oo Howlgallo ka sameeyey Muqdisho
May 15, 2019 admin161
Ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Gaashaan ayaa xalay waxa ay howlgalo kala duwan ka sameeyeen Xaafado ka tirsan degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada ayaa howlgalka intiisa badan ka sameeyay Xaafadaha ku dhow Isgoyska degmadaas,isla markaana waxaa ay kusoo qab qabteen dad u badan dhalinyaro.
Qof ku sugan Degmada Boondheere oo la hadlay Idaacada Dalsan ee Magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in Ciidanka howlgalka intii ay wadeen ay kusoo qabteen dhalinyaro badan,kuwaasi oo la isugu geeyay meel barxad ah,qaarkoodna looga shakiyay falal amni daro,sidoo kalena Ciidanka horey ay u wateen si baaritaano loogu sameeyo.
Habeen kahor ayaa waxaa Isgoyska Degmada Boondheere gaar ahaan dhinaca wadada soo aada Taalada Daljirka Daahsoon lagu dilay Guddoomiye kuxigeenkii hore ee amniga iyo Siyaasada ee degmadaas Cali Hiloowle oo ku magac dheer Cali dheere.
Allaha u naxariistee Cali dheere ayaa ku Guddoomiye ku xigeen u ahaa Guddoomiyihii horey ee Boondheere Cabdullaahi Xirsi Wardheere istakiin,isla markaana waxaa xusid mudan in isla Nawaaxiga habeeno kahor lagu dilay Shaqaale ka tirsanaa Wasaaradda amniga Soomaaliya.
Tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa Degmada Boondheere waxaa ka dhacay dilal qorsheysan,kuwaasi oo geysteen kooxo hubeysnaa Bastoolado.
Xigasho: Dalsan Radio
Boosaaso Ganacsigeeda oo Wali Xayiran
Gudoomiye ku xigeenkii Gobolka Mudug oo geeriyooday